Ndị njem si Poland: Seychelles adịla njikere maka ahịa ọhụrụ!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ndị njem si Poland: Seychelles adịla njikere maka ahịa ọhụrụ!
Airlines • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Ndi akuko • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Seychelles njem nlegharị anya mere emume anụ ahụ mbụ ya na Poland kemgbe ntiwapụ nke ọrịa a n'izu gara aga, ka ọ rata ndị ọkachamara njem ka ha ree agwaetiti Seychelles ọzọ, ọkachasị ugbu a ahịa ahụ ga-erite uru na ụgbọ elu ozugbo.
Ozi ukwu nke mmemme mgbede emere maka Warsaw bụ ọkwa nke iwebata atụmatụ ụgbọ elu ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu n'etiti Warsaw na Mahe Island. E mere atụmatụ ịmalite na Jenụwarị 15, 2022 mana ọ na-ejide ya n'ihi ụdị COVID ọhụrụ na-apụta.
Ozugbo a kwadoro ụgbọ elu ọhụrụ a ga-arụ ọrụ ụgbọ elu mpaghara Air Seychelles bụ nke ndị otu GSA ya, AIRLINES GSA na Poland nọchitere anya na mmemme ahụ bụ ndị nyeere ndị otu njem Seychelles aka na-ahazi ihe omume a. "Anyị na-agba mbọ ịnye ndị njem Polish nhọrọ ụgbọ elu kacha mma ma fega ha n'otu n'ime ebe mara mma," Mr. Radoslaw Grabski si TAL Aviation - AIRLINES GSA kwuru.
N'ịgwa ndị ọrụ njem 60 na njem nleta na mmalite nke ihe omume mgbede na Seychelles na-adabere na nkwado ha maka ịmaliteghachi njem na ebe a na-aga, onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya na-ahụ maka ahịa ahịa, Mrs. Bernadette Willemin, nabatara ọkwa nke njem ahụ. Ụgbọ elu Air Seychelles na-aga Warsaw, na-ekwu na ọ ga-enye nnukwu nkwalite na ahịa ma nyere aka itolite.
"O doro anya taa na Seychelles ka bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na nke a na-achọsi ike n'ụwa. Anyị ka na-enwe nchekwube na ihe nwere ike ịka mma naanị Seychelles na maka ahịa Polish," Oriakụ Willemin kwuru. O kwuru na kemgbe mmeghe nke ókèala ahụ na Machị, ebe ebe a na-aga achọpụtala mmụba nke ndị njem si n'ahịa Poland na n'ime izu 45 nke afọ, ọ ji nganga nọrọ ọnọdụ 5th na Top 10 kacha arụ ọrụ kacha mma. Akwụkwọ ikike maka Seychelles.
Ndị ọzọ na njem nlegharị anya Seychelles www.seychelles.ndu